Air Canada inowedzera network yayo yepasi rose yeMontreal nendege dzinoenda kuBucharest neLisbon
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Air Canada inowedzera network yayo yepasi rose yeMontreal nendege dzinoenda kuBucharest neLisbon
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kanada Breaking News • nhau • Portugal Kuvhuna Nhau • Romania Kupwanya Nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo
Air Canada nhasi yazivisa hutsva husingaregi masevhisi kunzvimbo mbiri nyowani dzinotevera kubva kuMontreal, ichiwedzera netiweki yepasi rose kuenda kuBucharest, Romania neLisbon, Portugal.
Uye zvakare, kutanga kwaJune 2018, iyo ndege ichavandudza sevhisi-yegore rese pakati peMontreal neCasablanca nekuendesa nzira inoenda kuAir Canada mainline kubva kuAir Canada Rouge nekushandisa ndege yeAirbus A330 inopa makirasi matatu ebasa. Ichawedzerawo yayo nyowani Montreal-Lima Air Canada Rouge sevhisi kutanga Zvita 2017 kusvika pagore kutenderera.
“Chiziviso chanhasi chinowedzera kusimbisa chinzvimbo cheAir Canada semutungamiri anotungamira pasi rose. Nemabasa matsva aya anobva kuMontreal, Air Canada inova yega ndege yekuNorth America inobhururuka ichienda kuRomania, musika mukuru weEuropean usingaende nendege dzeAtlantic, zvichisimbisa kuvepo kweAir Canada muSoutheastern Europe, "akadaro Benjamin Smith, Mutungamiri, Passenger Airlines paAir. Kanadha. "Kuvakira paAir Canada kubudirira parizvino mumusika wePortugal, nzira nyowani yeMontreal-Lisbon inosimbisa kuvepo kwendege mumusika wezororo wezhizha kubva kuMontréal. Uye zvakare, zvinowedzera kune edu ese-ese masevhisi kuCasablanca neLima zvinoratidza kuzvipira kuri kuenderera mberi kweAir Canada kukura Montreal senzvimbo yakakosha munharaunda yedu yepasirese. Pamwe chete, masevhisi matsva aya uye akasimudzirwa achapa vatengi nyaradzo huru uye sarudzo, pamwe nekwanisi yekubatanidza zviri nyore kuburikidza netiweki yedu yekuNorth America neInternational. ”
“Kuwedzeredzwa nekuwedzeredzwa kwendege dzakananga dzakaziviswa neAir Canada mhinduro yakajeka kuzvido zvevafambi, uye inosimbisa zvakare chinzvimbo cheMontreal senzvimbo yekufamba nendege uye inotungamira guta repasi rese. Nekutora matanho aya, Air Canada haisi kungosimudzira Montreal pasirese, asi zvakare ichisimudzira hupfumi hweguta. Idzi nendege nyowani hazvingosimbise kudyidzana kwedu nekutsinhana nenyika dzakapihwa, asi zvakare zvinowedzera mukana weMontreal wekukura kwehupfumi senzira yekunze. Ndiri kuda kukorokotedza Air Canada nekuparura makumi maviri ndege dzenyika dzakananga kubva kuguta redu mukati memakore maviri. Hatina kukwanisa kuzvikudza, ”akadaro Meya weMontreal, Denis Coderre.
"Nekuwedzera Lisbon neBucharest kunetiweki yeMontreal, uye nekupa basa kwegore rese kuLima, Air Canada iri kuenderera mberi ichisimbisa chinangwa chayo chekushandisa Montréal-Trudeau senzvimbo yekuronga, pamwe nekusimudzira sarudzo dzekuenda kubva kuMontreal," akadaro Philippe Rainville , Mutungamiriri uye CEO weAéroports de Montréal. "Kukwidziridzwa kwekuvandudzwa kwemasevhisi edu emhepo kunojekesa chinzvimbo chedu senzvimbo yemigwagwa yepasi rose, nenzvimbo dzakasiyana siyana dzezororo nemabhizinesi dzinosangana nechishuwo chevatakuri vedu chekuongorora, pamwe nehukama hwakanangana nemizinda inozivikanwa pasi rese."
Kaviri vhiki nevhiki Air Canada Rouge mwaka weBucharest sevhisi inotanga June 7, 2018 kubva kuMontréal, riine oparesheni yekupedzisira kubva kuBucharest muna Gumiguru 5. Ichazadzikiswa nendege mbiri dzeToronto-Bucharest dzinoshanda kubva munaJune 9 kusvika Gumiguru 7. Iyo Air Canada Ndege dzeRouge dzichashanda pamwe neBoeing 767-300ER ndege ine Premium Rouge uye Economy kirasi Service. Ndege dzinoiswa nguva yekugadzirisa kubatika kubva kunetiweki yeAir Canada kuburikidza neAir Canada yeMontreal hub uye inopa mukana weAeroplan kuunganidzwa uye kudzikinura.
Ndege Inosimuka Inosvika Kutanga / Kupera 2018 Mazuva evhiki
AC1928 Montreal 17: 20 Bucharest 9: 15 + 1 zuva Chikumi 7 / Gumiguru. 4 Mon,
AC1929 Bucharest 11:30 Montreal 14:05 Chikumi 8 / Gumiguru. 5 Chipiri, Chishanu.
* Bucharest nendege dzakatengeswa zvichienderana nekutenderwa nehurumende.
Iyo katatu-katatu vhiki nevhiki Air Canada Rouge mwaka weLisbon sevhisi inotanga muna Chikumi 15, 2018 kubva kuMontréal, iine oparesheni yekupedzisira kubva kuLisbon muna Gumiguru 27. Ndege dzinozoitwa nendege yeBoeing 767-300ER ine Premium Rouge uye Economy Kirasi sevhisi uye vanoitirwa nguva gonesa kubatana kubva kunetiweki yeAir Canada kuburikidza neAir Canada hub muMontreal pamwe nemukana weAeroplan kuunganidza uye kudzikinura.
AC1960 Montreal 20:45 Lisbon 8:10 +1 zuva June 15 / Gumiguru. Wed, Gumiguru, Zuva.
AC1961 Lisbon 9: 45 Montreal 12: 10 Chikumi 16 / Gumiguru. 27 Mon., China, Sat.
Air Canada yatove yakazivisa mishanu mishando yepasi rose ye2018 kubva kuMontreal. Izvi zvinosanganisira Montreal-Tokyo-Narita, Montreal-Dublin. Montreal-Lisbon, Montreal-Bucharest uye Montreal-Phoenix. Zvakare, sevhisi nyowani yeVancouver-Melbourne kutanga muna Zvita, 2017, pakutanga yakarongwa semwaka, ichashanda gore rese kutenderera munaJune, 2018.
Nzvimbo sere nyowani dzisingamise nzvimbo kubva kuMontreal dzakatangwa muna 2017: Shanghai (China); Marseille (Furanzi), Dallas / Ft. Worth (US), Washington / Dulles (US), Keflavik (Iceland), Tel-Aviv (Israel), Algiers (Algeria) uye kutanga muna Zvita Lima (Peru).
Air Canada, Air Canada Rouge nevamwe vayo venhandare yendege vanobhururuka pasi peAir Canada Express banner vanoshanda paavhareji dzinenge ndege mazana maviri nemazana mana pasvondo pakati peMontreal ne 2,400 nzvimbo: 87 muCanada kusanganisira vapfumbamwe muQuebec, 24 muUnited States, 20 muCaribbean. , Central America neMexico, 26 kuEurope, imwe kuChina, mbiri kuNorth Africa, imwe kuMiddle East, uye kutanga muna Zvita 13 imwe kuSouth America.